Waxaan maqalnay in deegaanka sunta lagu soo shubo ay ku dhashaan carruur cilladeysan oo naafo ah. Waxaa kaloo la weydiiyay waa inay adag tahay in xaqiiqo la soo uruuriyo kaddibna caddeyn saynis ah loo helo? Waxaana aan la kulmay ayuu yiri nin lagu magacaabo Pantito oo ka mid ahaan jiray koox dembiileyaal ah hase ahaatee ka baxay oo go’aansaday inuu la shaqeeyo garsoorka iyo police-ka. Qaar kalana weli way xiran yihiin oo ilaa iyo hadda cid furtay ma jirto. Paul Morera waa agaasimaha film-kaas, waxaa uu hawshiisa ka bilaabay dabal gal uu ku sameeyay sun fara badan oo si is-daba joog ah loogu shubay xeebaha sharci la’aanta ah ee dalka Soomaaliya. Film cusub oo documentary ah oo la yiraa Sunta Soomaaliya ayaa daba gal ku sameeyay ganacsigaas suuqa madow, waxaana si gaar ah loo eegayaa shaqo ay qabteen labo weriye oo Talyaani ah oo la dilay iyagoo baaritaan ku sameynayay sunta sida sharci darrada ah loogu shubo xeebaha Soomaaliya. Waxaa kaloo la weydiiyay waxaad la hadashay khabiir jarmal ah oo yaqaan haraaga sunta warshadaha kaas oo isagu baaritaan ka smeeyay markii ay Sunaamidu dhacday kaddib.
Carruurta naafada ku dhalata, aniga ahaan, iyo fuustda weyn ee xeebta aan ku arkay iyo markii dambe ee Muqdisho aan tegay oo aan arkay carruur badan oo cillado ku dhashay waxay u muuqataa inay sax ka dhigayso waxa burcad-badeeddu mar walba ku yiraahdaan warfidiyeenka dibadda, aniga waxay ila tahay waa dacaayad xaqiiqo ah. Qaar kalana weli way xiran yihiin oo ilaa iyo hadda cid furtay ma jirto. Waxaa kaloo la weydiiyay waa inay adag tahay in xaqiiqo la soo uruuriyo kaddibna caddeyn saynis ah loo helo? Waxaan maqalnay in deegaanka sunta lagu soo shubo ay ku dhashaan carruur cilladeysan oo naafo ah. Waxaa uu yiri Illaaria Albi waxay ahayd weriye ka tirsan RAI oo ah telesionka qaranka Talyaaniga, sanadkii tii waxay baaraysay sunta lagu shubo Soomaaliya iyo hubha dalkaas loo dhoofiyo. Agaasimaha waxaa kaloo la weydiiyay dareenka ay dadka deegaankaasi ka bixiyeen markii ay arkeen fuustooyinka sunta ah iyadoo hadda uu deegaankaasi yahay meel ay ku xoog badan yihiin burcad-badeeddu?
Kahor intii aysan u suurta gelin inay hawshaas dhammaystirto ayaana toogasho lagu bareed waddooyinka Soomaaliya. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Nin ka mid ah odayaasha deegaankaas oo ka jawaabaya xaaladda halkaas ka jirta waxaa uu sheegay in waagii hore afar meelood oo saddex meelood ay bxdeed jireen kalluumaysato haddase 20kii qofba uu mid keliya badda ka aado.
Waxyna i tuseen qol ay ku jireen carruur badan oo cillado isku mid ah qaba. Waxaana uu sheegay inay arrintaas aad uga careysan yihiin hase ahaatee aanay jirin si ay ku heli karaan cidda ka mas’uulka ah.
PRIMACOL BETON FILM
Maxaa saameyn ah uu leeyahay qabowga darran ee ka jira Bucad iyo Mareykanka? Wax kasta oo aad heshid, wixii aad arki karaysid, wixii aad goobjoog ka noqotid ma ahan wax saynis ahaan loo caddeeyay, dabcan fuustooyinkii halkaas ayay yaallaan, markhaatigii iyo goobjooggii badeeed ayay joogaan, carruurtii halkaas ayay joogaan, madaxa isbitaalku waxaa uu kuu sheegayaa in dhibaato ay jirto, waxaana dalka Talyaaniga aad ka helaysaa dad qiranaya inay ka shaqaynayeen sunta lagu shaubayo Soomaaliya, markaasi waxaad helaysaa waxyaabo badan oo kuu sheegaya in Soomaaliya loo isticmaalay in sun fara badan lagu shubo badda iyo berrigaba.
Film cusub oo documentary ah oo la yiraa Sunta Soomaaliya ayaa daba gal ku sameeyay ganacsigaas suuqa madow, flm si gaar ah loo eegayaa shaqo ay qabteen labo weriye oo Talyaani ah oo la dilay iyagoo baaritaan ku sameynayay sunta sida sharci darrada ah loogu shubo xeebaha Soomaaliya. Maqal Abwaan da’yar oo gabayadiisa diirrada ku saara dhaqanka bulshada Soomaalida Abwaan da’yar oo gabayadiisa diirrada ku saara dhaqanka bulshada Soomaalida.
Waxaa la weydiiyay sidee baad arrintaas film-kaada ugu caddeysay? Hawsha dib u habeynta suntaas oo reer galbeedka ay uga bixi lahayd boqollaal dollar waxaa hadda uga baxda dhowr dollar oo keliya si badda sharci darro loogu shubo. Maqal Macalimiin yaraan ka jirta Minnesota Macalimiin yaraan ka jirta Minnesota.
Maqal Barayaasha Jaamacaddaha Sudan oo dalbaday dibadbaxyo dheeraad ah oo ka dhan ah dowladda Barayaasha Jaamacaddaha Sudan oo dalbaday dibadbaxyo dheeraad ah oo ka dhan ah dowladda.
Maqal Maxaa saameyn ah uu fusub qabowga darran ee ka jira Yurub iyo Mareykanka? Maqal Qabow aad u darran oo saameeyay nolosha Soomaalida ku nool Mareykanka Qabow aad u darran oo saameeyay nolosha Soomaalida ku nool Mareykanka. Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Agaasimuhu waa uu sii hadlay. Waxaa kaloo la weydiiyay waa inay adag tahay in xaqiiqo la soo uruuriyo kaddibna caddeyn saynis ah loo helo?
cusb Qaar kalana weli way xiran yihiin oo ilaa iyo hadda cid furtay ma jirto. Waxaa uu sheegay in dadkii ay u kala baxeen qaar burcad-badeed noqday iyo kuwo aan waxba qaban oo meelaha iska joog-jooga. Waxaa uu yiri Illaaria Albi waxay ahayd weriye ka tirsan RAI oo ah telesionka qaranka Talyaaniga, sanadkii tii waxay baaraysay sunta lagu shubo Soomaaliya iyo hubha dalkaas loo dhoofiyo.
Paul Morera waa agaasimaha film-kaas, waxaa uu hawshiisa ka bilaabay dabal gal uu fiml sameeyay sun fara badan oo si is-daba joog ah loogu shubay xeebaha sharci la’aanta ah ee dalka Soomaaliya.
Film cusub ee sunta lagu daadiyay Soomaaliya 10 Maarso Waxaa uu agaasimuhu ku jawaabay: Waxaa kaloo la weydiiyay waxaad fil, hadashay khabiir jarmal ah oo yaqaan haraaga sunta warshadaha kaas oo isagu baaritaan ka smeeyay markii ay Sunaamidu dhacday kaddib.
Waxaana uu ii sheegay in waddammada ay bartilmaameedka ka dhigtaan marka ay sunta soo qubayaan ay yihiin kuwa aan nabadgelyadu ka jirin waayo ma jirto cid baaritaan kugu sameynaysa dalka Soomaaliya, Qaramada Midoobay hadal afka baarkiisa ah ayuun bay ka soo saaraan in Soomaaliya sun lagu shubo laakiin marna uma dirin cid si adag u soo baarta.
Carruurta naafada ku dhalata, aniga ahaan, iyo fuustda weyn ee xeebta aan ku arkay iyo markii dambe ee Muqdisho aan tegay oo aan arkay carruur badan oo cillado ku dhashay waxay u muuqataa inay sax ka dhigayso waxa burcad-badeeddu mar walba ku yiraahdaan warfidiyeenka dibadda, aniga waxay ila tahay waa dacaayad xaqiiqo ah. Sababaha ay burcad-badeeddu sheegaan inay maraakiibta u afduubaan dadkana u qafaashaan waxaa ka mid ah in xeebaha Soomaaliya si sharci darro kalluunkii looga mariyay, isla burcav sunta haraaga warshadaha lagu shubo Soomaaliya bad iyo berri intaba.
Maqal Wadada isku xirta deegaanada Soomaalida iyo Adisababa ayaa xiran maalintii saddexaad Wadada isku xirta deegaanada Soomaalida gadeed Adisababa ayaa xiran maalintii saddexaad.
Haddaba, arrintu intaas oo keliya kuma koobna, hase ahaatee waxay soo qaadeysaa su’aasha ku saabsan haraaga sunta ah ee lagu shubo xeebaha Soomaaliya burrcad aanay cidina ilaalin. Waxaana aan la kulmay ayuu yiri nin lagu magacaabo Pantito oo ka mid ahaan jiray koox dembiileyaal ah hase ahaatee ka baxay oo go’aansaday inuu la shaqeeyo garsoorka iyo police-ka.
Film cusub ee sunta lagu daadiyay Soomaaliya – BBC News Somali
Waxaa uu yiri badfed waxaa uu hoos tagaa maamul-goboleed la yiraa Galmudug oo laga yaabo inaadan weligaa maqal oo xaruntiisu tahay koonfurta magaalada Gaalkacyo, waayo qaybta kale ee magaalada waxay hoos tagtaa maamul-goboleed kale oo lagu magacaabo Puntland kaddibna waxaa baabuur lagu soconayaa muddo 17 saacadood ah si loo gaaro meesha sunta lagu soo qubo.
Agaasimaha film-ku waxaa uu sheegay in markii uu isu-geeyay wixii uu Soomaaliya ku arkay uu aaday dalka Talyaaniga sababtoo ah mid ka mid ah shabakadaha uu wax ka qoray ayaa Talyaani ah.
Waxaan maqalnay in deegaanka sunta lagu soo shubo ay ku dhashaan carruur cilladeysan oo naafo ah. Agaasimaha waxaa kaloo la weydiiyay dareenka ay dadka deegaankaasi ka bixiyeen markii ay arkeen fuustooyinka sunta ah iyadoo hadda uu deegaankaasi yahay meel ay ku xoog badan yihiin burcad-badeeddu?
PIRANDELLO E IL CINEMA TESINA
Previous Post WATCH THE ANT BULLY 1CHANNEL
Next Post BELLE E SEBASTIEN FILM STREAMING CASACINEMA